Sida loo Edit Sony 4K Video
A 4k video footage runtii siinayaa caddayn sax ah oo ku saabsan sida fog ee warshadaha naqshadeynta iyo sawir uu ku faafo A.villa. Daawashada Sony 4k video waa mid aad u xiiso iyo khibrad nolosha dhabta ah in daawadayaasha ka. Laakiin sixiddiisa kuwa super macaan oo sare videos qeexidda waa hawl Herculean iyo beddesho karaa xanuunsan marka aad la'aan computer ah super. Your kaliya baado nolosha noqon lahaa software sida Adobe jilitaankii Pro CS5.5 iyo wixii ka sareeya ama Adobe ka dib Dhibaatooyinka CS6.
1. Ku rakib iyadaana ka dib Raadka CS6 ama Adobe jilitaankii Pro 5.5:
Haddii ay dhacdo in aadan haysan kor ku xusan software, download iyo rakibi Adobe jilitaankii CS 5.5 iyo ilaa ama ka dib Dhibaatooyinka CS6 tan iyo kuwaas 4k videos run ahaantii si fiican u la shaqeeyaan versions kor ku xusan 5.5 ama 6 fiican. Hubi in waxa uu si fiican u rakiban.
2. Ku rakib soo dejiya RED labada dib Dhibaatooyinka iyo Ciyaar,
Tag goobta Adobe iyo rakibi soo dejiya RED lacag la'aan ah.
Download RED Epic soo dejiya plugin for CS5.5 iyo plugin camera RED u CS6.
Labada faylasha siibka in aad desktop. CS6 diyaar u yahay inuu tago la plugins soo bixi laakiin dadka isticmaalaya CS5.5, halkan talaabo dheeraad ah aad u baahan tahay in la sameeyo.
Dadka isticmaala CS5.5 oo kaliya:
Habka loo xirxiro waa kala duwan ee Mac iyo daaqadaha. Just furo Read aniga iyo maraan tallaabooyinka loogu rakibidda plugins ah. Asal ahaan aad u baahan tahay in la furo jilitaankii Pro CS5.5 RED Review oo waxaad soo qaaddaa files laga keeno iyo bedelo iyaga la fura in aad soo bixi meel (C drive). Haddii weli aad qabto dhibaato ku soo degida videos cusboonaynta aad version.
3. Samaynta mashruuc cusub oo buuxinaya goobaha ay:
Fur Adobe Premier CS6.
Marka sanduuqa hadal ka soo booda baxay click on New Project.
Markaas sanduuqa kale hadal ka soo booda. Dooro meesha aad rabto in aad ku kaydiso mashruuca in.
In Dialog New Mashruuca Box, ugu samayno isbeddellada loo baahan yahay. In aad mashruuc Sii magacaaga.
4. Beddelidda goobaha aad iskugu xigxigaan:
In presets xigaan, dooran RED R3D. Waxaa by default yimaado rakibay la Adobe CS6 laakiin CS5.5 waxaad u baahan doontaa in la sameeyo qaar ka mid ah goobaha dheeraad ah oo si fiican u samaysay. In RED R3D, dooran video aad rabto in aad si gaar ah ugu xaalkaa dooro 1080p oo ugu dambeyntii guji ok. Sidaas xigxiga 1080p ah uu furay. Tan waxaa loo sameeyey, maxaa yeelay, kombiyuutarka uu hoos Kobocii haddii aad la doorto ikhtiyaarka 4k. Samaynta tashiil, helitaanka waqtiga diyaar, oo dhan ayaa la sameyn doonaa in 1080 p version oo mar haddii la sameeyo oo dhan video loo badalo version 4k doonaa. Tan waxaa loo sameeyaa si dhakhso tafatirka.
5. Keenista ee file video 4k:
Wixii soo degida file cusub, u tag si aad u gudbiso dejinta file. A sanduuq cusub oo wada hadal soo booda. Dooro file aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan iyo in ka dib markii guji ok. Sug ilaa aad file uu keeno.
6. Kor u qaadidda faylka keeno:
Ka dib markii file video ah uu keeno, waxaa jiidin waqtiga sida kaaga muuqata sawirka hoose.
Riix clip iyo fiiri sanduuqa hadal Raadka Control kaliya kor ku xusan jadwalka.
In Raadka Control, guji Control Motion taas oo hoos u dhac ku hoos menu. Sawirka soo socda waxay muujinaysaa sida sanduuqa wada hadal u muuqataa shaashadda.
Waxaad ka arki kartaa miisaanka dhigay ilaa 100. Qiyaasta file video hoos u 47%. Laakiin haddii ay sidaas yeesho, ay qaadato badan oo boos Kombuyuutarada ilaa tan iyo isbedel aan ka samaynayno si toos ah faylka 4k laakiin ma aha on version 1080p ah. Sidaas talaabadan waa in laga fogaadaa ama u Demi in 100% dib.
7. Sida loo Kordhinta dhammaataan:
Habka ugu xaq u siiyay video waa go in wax ka bedel.
Edit Preferences General.
Sanduuqa hadal A booda. In jeeg in sanduuqa muujinaya Miisaanka Default in jire size haddii aan la soo xulay. Dheellitir wax goobaha kale haddii aad rabto in aad ka dibna riix ok.
Delete footage video kaas oo laga keeno ee waqtiga ka.
Laakiin mar kale jiidi faylka keeno dib ugu waqtiga oo hadda waa ay is beddeleen.
Riix clip, oo arka sanduuqa Raadka Control xaq ku xusan jadwalka.
In Raadka Control, guji Control Motion taas oo hoos u dhac ku hoos menu.
In sanduuqa Motion Control, waxaad ka arki kartaa miisaanka laga beddelo si 100%. Waxaa loola jeedaa waa la siiyo wakiil 1080p ee file a 4k ah. Tani waxay ka dhigan aadan mar dambe la shaqeynta faylka 4k laakiin nuqul ka 1080p ka mas`uulka ahaa faylka 4k.
Tag xal kala bar ama xal quarter. File ayaa la ciyaari doona in si fiican.
8. tafatirka faylka 4k:
In CS6 software ee sixiddiisa sinix RED, hore ayaa lagu rakibay sida plugin ah, laakiin haddii ay dhacdo ee Premier Pro, xaq u yeerto on suuqa kala mashruuca, xusho goobaha ilaha in la furo in kor.
Waxaad toggle karaa iyada oo clip iyo haddii aad rabto inaad beddesho qalooca gamma in ay REDLogFilm taas oo ay noqon doontaa arrin waxtar leh idinka iyo siinaysaa aragtida ah sasabato.
Sida doonayo bedeli dhalaalka, macaamiloon, dheelitirka cad ama mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee aad doonayso in aad qabato si ay u saxaa.
Riix OK. Waxaa cusbooneysiin doonaa isbedelka cusub ee video ah. Hadda ayaad ku laaban kartaa oo wax ka bedelo haddii aad rabto in aad. Markaas badbaadin mashruuca.
9. siin oo dhan file video 4k:
Fur Adobe ka dib Raadka.
Tag file import Adobe jilitaankii mashruuca Pro.
Sanduuqa hadal A ilaa booda iyo doorteen faylka. Haddii aad rabto audio lahayn, uncheck sanduuqa sida hoos ku qoran.
Qaado isku xigxiga ee liiska laga keeno oo jiidin aad halabuurka cusub ka dib markii uu saameyn.
Guji ku yaal iyo dooran halabuurka furan oo waxaad yeelan doontaa oo dhan jeexan aad ee ka kooban in.
Midig u guji oo taga si uu u furo ka kooban dooro file ceeriin iyo weeraray muhiimka ah ee s. Hadda kartaan Julius Karangi ayaa 100% aad. Waxaad ka heli doontaa in Premier mid u haboon shaashadda dhammaataan laakiin haddii ay dhacdo kale oo ay habka aad u weyn.
Markaas guji siin moodo faylka.
Haddii aad u malaynayso in this waxaa aad u adkayn idiin, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), kaas oo wax ka bedel kartaa Sony 4K video files leh qalabka tafatirka fududahay in la isticmaalo, laakiin xoog badan. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
Sida loo Edit GoPro 4K Video
Top Software 10 4K Video ayeey 2015
Sida loo isticmaalo VLC sida Video Editor ah?
> Resource > Video > Sida loo Edit Sony 4K Video